HTC Vive Pro, mkpebi ọzọ maka ntinye nke HTC na mebere eziokwu | Akụkọ akụrụngwa
Ikwu okwu banyere ezi okwu bu ime ya banyere mpaghara ahia nke, dika ogologo oge, odi ka o kwere otutu nkwa kama, n'otu uzo ma obu uzo ozo, adighi ewepu ma obu mezu oke olile anya nke otutu ulo oru di na ahia eme ka anyị rọọ nrọ. N'agbanyeghị nke ahụ, eziokwu bụ na a ka nwere ndị na-aga n'ihu na mmepe nke teknụzụ a, n'agbanyeghị na ọtụtụ ụlọ ọrụ 'agbahapụla ụgbọ mmiri' dịka enwere ike HTC na nke ọhụrụ ya Ndụ Pro.
N'ime usoro CES 2018 Ndị isi nke ụlọ ọrụ Taiwanese kpebiri na nke a bụ ezigbo ihe omume iji gosi ụwa HTC Vive Pro ọhụrụ ha, ụdị dị mma nke iko eziokwu ha na-egosipụta ugbu a maka ịnye mkpebi nke na-enweghị oke ahịa n'ahịa. Dịka nkọwa zuru ezu, gwa gị na otu n'ime ihe ọhụrụ ndị dị omimi sitere na mgbanwe a nke ngwaọrụ a maara nke ọma bụ nnabata nke OLED ngosipụta con mkpebi 2880 x 1600 pikselụ.
1 N'ihi mmụba nke mkpebi na ume ọhụrụ, ogo onyonyo nke HTC Vive Pro na-eto nke ukwuu
2 Ndị na-ese ihe nke HTC ekpebiela ịgbakwunye na ngwaahịa ha ihe ekweisi agbakwunyere kpamkpam na imewe
3 Ada Ada Ikuku Ada Ada, ikuku controllers dakọtara na ndị ọhụrụ HTC Vive na aga na ndị
N'ihi mmụba nke mkpebi na ume ọhụrụ, ogo onyonyo nke HTC Vive Pro na-eto nke ukwuu
Dabere na nkwupụta nke HTC n'onwe ya bipụtara, ọhụụ ọhụrụ Vive Pro pụtara, n'etiti ihe ndị ọzọ, maka ịnye a 78% mkpebi dị elu na HTC Vive na ruo ugbu a ka erere ma nwee ọ enjoyedụ 2160 x 1200 pikselụ, obi abụọ adịghị ya na isi okwu dị ha mma, ọkachasị maka ndị mmepe niile na-eji ụdị ngwa a maka ahịa ọkachamara na nke ka nke a chọrọ akụkụ dị mkpa mmalite.
N'ịga n'ihu na mmụba nke mkpebi ọhụrụ nke HTC Vive Pro, dị ka ụlọ ọrụ ahụ si dị na ekele maka ojiji nke ogwe OLED ọhụrụ ndị a, nkwonkwo njikọ nke ha abụọ yiri '3K'. N'aka nke ozo, anyi aghaghi iburu n'uche nke ahu a na-amụba ume ọhụrụ na 75 Hz nke pụtara, ọ bụrụ na anyị ejikọta ụzọ abụọ a, onye ọrụ njedebe ga-enwe ike ịnụ ụtọ ogo onyonyo dị elu karịa ekele maka nkọwa dị elu.
Ndị na-ese ihe nke HTC ekpebiela ịgbakwunye na ngwaahịa ha ihe ekweisi agbakwunyere kpamkpam na imewe
Maka mmelite a, ikekwe otu n'ime ndị mmepe, ndị ọkachamara ma ọ bụ ndị na-egwu egwuregwu na-arịọkarị, agbakwunyere onye ọzọ na, n'agbanyeghị na ọ bụghị ihe dị egwu, dịkwa oke mkpa n'ihi uru na nkasi obi ọ nwere ike ịnye. Dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo anyị na-ekwu maka mwekota nke ndị na-ekwu okwu, ihe ndị ọrụ niile na-arịọrịrị ma kwadoro site na HTC n'onwe ya, ga-eme ka iko ahụ nwee ọfụma karị iyi.
Ọ bụrụ na ị jirila ọgbọ mbụ HTC Vive ma ọ bụ nwee mmasị ịnweta otu, ọ ga-eju gị anya na, ịge ntị n'ụdị ụfọdụ, ị dabere na ihe ụlọ ọrụ Taiwan kpọrọ Ihe Deluxe Audio Strap, ihe eji enyere gị aka iji ekweisi. Na HTC Vive Pro, nke a ghọrọ ugbu a Enyemaka zuru oke nke na-adịghị mkpa ugbu a.
Ada Ada Ikuku Ada Ada, ikuku controllers dakọtara na ndị ọhụrụ HTC Vive na aga na ndị
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ịsị nkute na-enweghị ikwu maka Ada Vire Wireless, ngwa ngwa ohuru nke, n’agbanyeghi na o nwere aha di mgbagwoju anya ma sie ike icheta, abughi ihe kariri akara ikuku ikuku nke kwekorita ya na uzo ohuru nke HTC Vive na nke gara aga. Dị ka anyị nwee ike ịma, njikwa ọhụrụ ndị a mejuputa teknụzụ Intel WiGig, ihe na-eme ha obi uto nke ukwuu n’ihi oke ohere ha nwere. O di nwute na dika HTC si kwuo, ngwa a ka gha ewe oge iru ahia ebe obu na adighi ele anya mmalite ya rue oge nke ato nke ato a.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na HTC Vive Pro, gwa gị na, ọbụlagodi ugbu a, anyị nwere ike ịnye gị nkọwa ndị kachasị mma nke enwetarala na nkwupụta ya ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ achọghị ịme ka ọha na eze dị ka ụbọchị mmalite. ma ọ bụ ọnụahịa ọ bụ ezie na, n'oge a, ọ bụ eziokwu na ha kwuru na ngwaahịa a dị elu ka anyị wee were ya ha agaghị adị ọnụ ala maka onye na-azụ ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » HTC Vive Pro, mkpebi ọzọ maka ntinye nke HTC na mebere eziokwu
ThinQ, smart friji nwere 29 "ihuenyo sitere na LG
Panasonic gosipụtara OLED TV ọhụrụ ya na CES 2018